In this article aan la doonayo in la eego sida ay u tirtirto aad iCloud account on qalab kala duwan oo xitaa aan sirta ah. Aan lagu bilaabayaa sida aad u samayn karaa on your iPhone ama iPad.
Qaybta 1. Sida loo tirtiri account iCloud on iPhone / iPad
Ka hor inta aynaan bilaabin, waxaa muhim ah in la tilmaamo in gurmad waa in aad qalab ee wax kiiska qaldamaan.
Tallaabada Koowaad: Tubada on app Settings ka dibna hoos si aad u hesho iCloud. Tubada on "iCloud" si aad u furto.
Tallaabada Labaad: hoos ilaa aad ka heshid "Delete Account" oo markaas garaac in.
Talaabada Sadexaad: waxaa lagaa codsanayaa inaad si loo xaqiijiyo tirtirka ee account iCloud ah. Tubada on "Delete" mar kale si loo xaqiijiyo.
In kuwa saddex tallaabo oo aad wax ku ool ah xisaabtaada iCloud ka iPhone ama iPad ka saari kartaa. Marka taasi la sameeyo, waa laga tegi doonaa in aad la account maran iCloud iyo waxaad dooran kartaa in la abuuro ID cusub Apple ama la bedelo si account kale iCloud.
Qaybta 2. Sida loo gab iCloud on Mac
Haddii aad u baahan tahay inaad gab iCloud on Mac ah, inay raacaan talaabooyinkan mid aad u fudud.
Tallaabada Koowaad: Riix Apple Icon ka dibna "rabtid System" ka menu xaaladda.
Tallaabada Labaad: furmo rabtid System, Riix "Mail, Xiriirada & Kalandarada."
Talaabada Sadexaad: La ka Murayaad bidix ee suuqa kala dhashay Dooro iCloud.
Talaabada Afraad: socda in App ah Fiiri sanduuqka aad rabto in aad gab ama awood in ay leeg- tahay ku yaal dhinaca midig.
Qaybta 3. Sidee inuu ka saaro iCloud kombiyuuterada Windows
Haddii aad xisaabta iCloud waa on a computer daaqadaha iyo aad rabto inaad ka saartid, halkan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida ay si fudud u samayn in. Laakiin ka hor inta aan helno in tallaabooyinka waxaa muhiim ah in aad leedahay raad raac u ah dhamaan macluumaadka aad ku iCloud ah.
Tallaabada Koowaad: On aad Windows PC, guji "Start" iyo guddi ay gacanta. In guddi ay gacanta ku, Dooro "uninstall Program ah"
Tallaabada Labaad: Raadi iCloud in List barnaamijyada on your computer.
Talaabada Sadexaad: Dooro saarto iCloud for Windows ka Computer marka ay keentay in.
Talaabada Afraad: Riix "Haa" si loo xaqiijiyo Kabcada_ oo sugi in geeddi-socodka si uu u dhameystiro.
TALAABADA SHANAAD: Riix "Haa" marka PC ku weydiiyo haddii aad rabto in aad iCloud in isbedel si ay.
Tallaabada Lixaad: Marka geedi socodku waa dhameystiran, guji "Finish" oo markaas gacanta guuleysatey aad nidaamka.
Qaybta 4. Sida loo saar account iCloud aan password
Haddii aad u halmaanteen la sirta iCloud oo aad rabto in meesha laga saaro xisaabtaada iCloud, halkan sida loo sameeyo talaabooyin fudud.
Talaabada Koowaad: Tag app Settings iyo heli iCloud. Tubada waxa ku tahay in la furo.
Tallaabada Labaad: Marka baxdo sirta ah, geli kasta lambarka aan sugnay. Markaas Tubada on "sameeyeen."
Tallaabada Saddexaad: iCloud ayaa kuu sheegi doona in magacaaga iyo isgarad-aad soo gashay waa sax ahayn. Guji "OK" iyo ka dibna "Cancel" in ay dib ugu weyn ee iCloud page tagaan.
Talaabada Afraad: mar Tubada on Account laakiin wakhtigan, ka saar sharaxaadda oo markaas garaac "sameeyeen."
Tallaabada shanaad: Markan, laydiin celin u iCloud bogga ugu weyn ee la qaadi doonaa oo aan haysan si ay u galaan sirta. Waxaad sidoo kale arki doontaa in ay "Raadi aan Phone" feature ayaa la demiyo si toos ah.
Tallaabada Lixaad: Waxaad markaa hoos ugu rogto oo ka jaftaa ku tirtirto. Waxa loo gudbinayaa Waxaad si loo xaqiijiyo Kabcada_ oo aad samayn kartaa adigoo siyoodba on "Delete" mar kale.
> Resource > iCloud > Sida loo saar iCloud Account leh ama aan lahayn Password